SAWIRO:Waftiga la socda madaxweynaha Jubbaland oo Muqdisho loogu sameeyey….. – DMS
HomeWararkaSAWIRO:Waftiga la socda madaxweynaha Jubbaland oo Muqdisho loogu sameeyey…..
SAWIRO:Waftiga la socda madaxweynaha Jubbaland oo Muqdisho loogu sameeyey…..
29th March 2019 editor
Wasiiru Dawlaha Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa Casho Sharaf u sameeyay wasiirrada Dawlad Gobaleedka Jubbaland ee socdaalkiisa Muqdisho ku wehliya madaxwaynaha Jubaland, Axmed Maxamed.
Casha sharafta oo ay kasoo qayb galeen qaar kamid wasiirada dawladda federaalka iyo howl-wadeennada xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ayaa lagu soo dhaweeyay wasiirrada ka yimid maamul gobaleedka Jubbaland.
Wasiirrada Jubaland ee casha Shafata kasoo qayb galay ayaa aad uga mahadceliyay wasiiru dowlaha xafiiska ra’iisul Wasaaraha soo dhawaynta heerkeedu sareeyo, waxa ayna sheegeen in ay soo dhawayntu kaabayso wadashaqeynta iyo isku xirnaanta labada dhinac.
Wasiiru dawlaha xafiiska ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Cabdullaahi Xaamud ayaa wasiirrada uu cashada u sameeyay waxa uu kala hadlay dardar-gelinta wada shaqaynta ka dhaxaysa wasiirrada dawlad gobaleedka Jubaland iyo wasiirrada ay wada-shaqayntu kala dhexeyso ee DFS.
SAWIRO:Masjid ku yaala London oo weerar uu ka dhacay
SAWIRO:Dad ku geeriyooday dhisme dabaqyo ah oo ku yaala Bangladesh